Anja Schaap asati atsigirwa a PsyOp? Ona kuti sei (vhidhiyo) pano: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 3 June 2019	• 15 Comments
Imwe Anja Schaap yakatove yakaratidzwa se PsyOp (kushanda kwepfungwa) here? In chinyorwa changu chekare Ndatove ndaratidza kuti nyaya yeAnja Schaap inogona kunge yakatarisana nekusvitsa kwekushandisa kwekutsvaga kunonzi 'Sherlock'. Zvakanaka, tinoonei patinoona peji Facebook yeAnja Schaap? Zvino tinoona kuti ane kero inotevera pasi pekero yake: 221B Baker Street. Achifunga kuti iyi haisi yejoke inorwadza, kubatana nehurongwa hweS Sherlock kuchabva wava pachena pano.
Ndiani akamborarama pa 221B Baker Street muLondon? Zvakarurama, Sherlock Holmes. Saka zvinonyatsojeka kuti mifananidzo yeAnja Schaap, kusanganisira iyo yose yehutano hwevanhu (kana zvikamu zvayo), yakakanganiswa pamwe nenzira yekudzika. A network of Inoffizieller Mitarbeiter inogonawo kushandiswa kupa kuvimbika kune Facebook network. Chero mamiriro ezvinhu, zvakajeka kuti vanhu vanongoratidzira pachena pachena chibatanidza neHerlock app. Tora uye tarisa pashure ichi chinyorwa Zvakanaka kuti unzwisise kuti zvakadzika sei zvakaitwa uye zvinoshandiswa.
Zera remakore 33, zvakare chiratidzo chekuti tiri kusangana ne Freemason PsyOp. Nhamba ye33 inomirira dhigirii yakakwirira mukati memusangano unovanzika.
Nhamba yezvinyorwa paAnja's Facebook timeline inoratidzika zvishoma uye pakuwedzera, mhinduro dzacho dzinenge dzichinyanya kuuya kubva pakudzidza maitiro. Iyo yose nhoroondo yeAnja pachake inoratidzika kuva yakadzika. Mukuwedzera, nguva yaro inoreva kuna Alice muWonderland, iyo inotaura nezvemazamu emutsotsi wemarighi (nzira dzinopera). Zviri kukonzera kuti iye anongoratidzika kunge ari kushanda kwe2 kwemakore, uye zvinotonyanya kukosha kufarira kwake mumitambo yeTV pamusoro peSherlock Holmes (funga nezveSherlock app).
Isu tinoonawo zvinyorwa kunaJohn de Mol, yandakaratidza munyaya dzezvinyorwa kuti izvi zvinogona kuva munhu mukuru mushure mekuwedzera zvibereko ("Ndiani anonzi De Mol?"). Ndizvo zvose izvi pasi pekufungidzira kwe "Kana tikaratidza pachena uye tinobva taenda nayo, zvino tinoziva nechokwadi kuti tinogona chaizvo kutaurira vanhu zvinhu zvose"?
The Jos Brech: "Kutongwa kwepfungwa" mushure mokunge zhizha 2019
Tags: 221B, Anja, App, Baker Street, dzikadzika, deepfakes, Facebook, Featured, Holmes, profile, psyop, Makwai, Sherlock, kushayikwa, kushayikwa
Mashoko ari pasi apa anobva ichi chinyorwa (verengai zvose kuburikidza nechokubatanidza):
Ndinoona rudzi rwekuchema rubatsiro mune Facebook yako here?
Kunyangarika kwaSiebe Viegers kwakaratidzawo pachena kuti kunyange mumwe munhu anogara munharaunda akanga asina kumbobvira akamboona mamita maviri-akakwirira Siebe, izvo zvisingabviri, kuitira kuti kurasikirwa kunokonzera 100% mumhepo kwemaawa.
Izvi zvinogona kuva chimwe chimiro chekurasikirwa, chaizvoizvo zvingava zvechokwadi
Vanhu ivavo vanobatanidzwa mumitambo yakasiyana-siyana uye vanhu vanoshanda munzvimbo dzevanhu vakadaro vanopinda mairi vanogonawo kutongerwa mhosva, inogona kunzi varwere, vanhu vane hana uye vanogona kureva nhema kuvanhu kwenguva pfupi mari inoyerera kana imwe rubatsiro, ndinofungidzira kuti kuchema kwako kubatsirwa kwakarurama, Mr. Vrijland
Vanhu vanorwara vanoita nhanho mumabasa akadaro havana unhu uye havanzwisisi kuti vanhu ivavo vanogona kutarisa sei nzvimbo dzavo uye nhengo dzemhuri. (kuipa kudarika kushungurudza maitiro)
"Hungu, asi Siebe Viegers akawanikwa kuti akanga asiri psyop" vanhu vachati ipapo
Mhinduro: Kwete, ndizvo zvinotaurwa nevhidhiyo. Izvozvo ndizvo zvinenge zviri nyore nzira yekuti "zvakanaka" ipedze psyop yakawira mumudengu?
Hungu, zvichida, nokuti kana vakateerera foni yangu (iyo yandinofunga inonzwisisika) vaiziva kuti ndaive nemifananidzo yakawanda (yakadai sekunyoresa kwekukurukurirana mubhuku umo Siebe akazopedzisira aonekwa).
Ehe hongu ... takawana vakafa, asi zvakanyanya kuoma kuti tione kuti chikonzero chacho chii. Kana kuti haana kungovapo here? Uye iyo nyaya yakafanirwa kuwira mukutadza here?
Fleur ndiye chete akaisa mhinduro 🙁? : verenga
Nyaya inosuruvarisa nyaya
Iwe unosvika sei kumapeji facebook eyi anja makwai?
Ini handigoni kumuwana, ini ndatofananidza hukama.
Kana iri yose ichokwadi iyo inoseka hongu.
Tsvaga psyop rinotyisa ???
Ndinoreva kuti zvinonyanya kukosha zvokuti zvinoratidzika kuti vanozvipira nemaune naSherlock Holmes mubhuku re facebook, sokunge kuti vari kuzviita.
Izvo zvechokwadi hachisi chaizvo kuseka, pane kuchema.
Asi ndakafunga kuti zvakanga zvakajeka.
Zvakanaka, pakutanga ndaive nemafungiro ekuti iwe wakanga uchingoratidzira psyop.
Mafungiro munyaya idzi anowanzovandudzwa zviito zveGladio. Ivo vanonyanya kuvanzika, vakachenjera, subliminal.
Zvakanaka, varume vanobva mune script vanoziva kuita izvozvo. Vanoramba vachishanda mukudzora zvinhu zvose maererano nezvavanoda.
ludcor akanyora kuti:
Hakuna mubatidzi muMaspala weKatwijk (musha uye nzvimbo yekuberekwa yeAnja). Zviri pachena kuti psyop.
Hauna kutombotaura kunyange nezita ramakwai. Mamwe makwai anozvibvumira kutungamirirwa uye anotya nemakwai (media) kuitira kuti zvinoratidzika kuti vatungamiri venyika yedu vanoreva zvakanakisisa kwatiri.
Unofungidzira kuti iwe wakanyatsokodzera, TV West yakashandisa Face Morphing, yakanyatsobatana necreencreen,
Uchapupu hunoratidza hupenyu hweAnja Schaap hwave huripo hunoitwa chete nemunhu aizorarama pasi peimba yaAnja pa Wega 15. muKatwijk, inoratidzwa mufirimu yeTV West nguva yemazuva, ona TV yeWest West iyo inosangana
Zvisinei, kana tikasvitsa pane chiso chomunhu, isu tava kutoona zvimwe zvisiri izvo zvisiri izvo.
Pamusana pemutemo weVVG, hazvibviri kuisa mufananidzo panzvimbo ino iyo inogona kuratidzirwa kuti zvipi zvinokanganisa zvinobatanidzwa. Kunyangwe vaita zvakanakisisa zvavo, zvikanganiso zvakakomba zvakaitwa, asi zvirokwazvo iwe unotofanira kutarisa pane chiso, hakuna munhu anotora nguva iyoyo asi fungidzira kana iwe uchiita
Pasi pegumi zvakawanikwa: miniti 01 min -25 sec. 00 kusvika 01 min-51 sec. 18 kune zvakawanda asi izvi ndizvo zvinonyanya kukosha.
1- Nzeve dzomurume dzakanamatira kune chiso chakashamisa
2- Kuumbwa kwenzeve kunogona kutaurwa nezvazvo asi kunogonawo kudanwa kusina-kwenyama
3- Rudzi rwebvudzi, musoro kubva mumvuri kusvika ku gray uye goatee Red? (zvinogoneka, asi zvakadaro?)
4- Minute 01-28.2 Mucheka wakakura pamutsara wejaya? Izvozvo ndezvekuti murume anotendeukira musoro wake kuruboshwe, hongu zvinogona, asi bundu (chinyaradzo chinyorwa) chiripo apo iyo musoro ichichengetwa.
5- Iko kusvibiswa kukuru kune uko kwakapoteredza jawline uye nehuro, asi jekete yakaita checkered inoratidza
razor-inopinza mufananidzo, unogona kuona kunyange machira acho zvakanaka.
6- Enda kubva wechipiri 1-37.07 kusvika 1-37.19, Kuzarura muromo kunotaridzika se robot
mutsara wezasi unofamba asi ziso rose rinoramba rakasimba, izvo zvisingaitiki.
7- Pasi pfupi 1-45.17 maziso akazaruka zvachose, saka kuwanda kwechiedza kwaizouya pamakumbo emafudzi, asi zvakanaka uye kusviba kurima zvakare, kukanganisa
8-01-46.19t / m 01-47.12 Izvozvi hazvina maturo, mabhegi ayo ose anoratidza wrinkles kurudyi rwake uye kwete kuruboshwe rwake zvachose, maziso ayo akaenzana zvikuru, makurukota
inonyanya kuwedzererwa, mashizha asingagoni kuonekwa kwechipiri. Pane zvishoma nezvishoma pamatama asi misumbu haisipo, eyelashes haichazooneki ... etc ...
9- Inzvimbo inotyisa yepavara pamusoro pemakona emuromo, regai vaende nguva dzose
kufamba nekuratidza uhu uye nekudzika kwemuromo wake, zvinoratidzika zvisati zvisizvo.
10- Minute 01-38.07 kusvika kusanganisira 01-42.22 Ramba uchitarisa muhombodo yejekete rakaputika nepamusoro pemutsipa waro unogara uchifamba, chivharo chinosungirirwa (hood) chinotarisa chinyorwa pamwe uye chinoramba chiripo-chinopisa kwose kwose ikamera ichiri kushungurudzika, asi yakaoma kamera ma.
11- Kungofanana nomutarisiri akanaka: hausi kuona rusvingo rworuboshwe uye chero rumwe rutivi rwunofamba rwunofambidzana nechepamberi, iyo inofanira kunge iri nokuti kamera inoramba ichigumbura.
uye ona dzimwe nzira
Mutemo weVVG hauna kunyatsogadzirirwa vagari vemo, izvo zvingave zvakajeka ikozvino.
Izvo ndezvezvinyengeri zvakare kutaura kuti Media (= simba rinoshanduka) inogona / inokwanisa kubhururuka kune vanhu vakawanda, asi vanhu havagoni kushandisa nzira dzavo kune vamwe vanhu, vanhu vanogona kuratidza izvozvo. Zvose zvinopesana neshoko rekusununguka ndokubva ramba richireva uye tichidavira kuti tinorarama munyika ine rusununguko rwehurumende. Ne nzira yavo vanopa uchapupu hwakananga hwokuti tinorarama mukudzvinyirira, asi isu hatigoni kuratidza kuti nokuti izvozvo zvinorangwa zvakare
Ndinobvumirana! Ona kuti kurambidzwa kwekunyora mafirimu 'vashandi vehupfumi' kuchakurumidza kusanganiswa nemutemo wepachena. Nyika inoshandisa hunyengeri, Machiavellian kufunga. Iwe unongomhanya yose 180 °
"Kubatsira kuparadza kuburikidza nekudhinda mafirimu uye kugoverana mune zvehupfumi: chirango chakaoma!
nekutora mafirimu iwe unopesana nehuwandu hwevanotambudzwa. "Kunyora mashoko akadaro mumagariro evanhu vanofanira kurangwa zvakaoma. Nokuti zvakadini nemutemo wepabonde, kusataura kuti vhidhiyo yakadaro inoitei kumhuri neshamwari. "
Wout akadaro angangoenda nenzira yake pachayo uye anobatsira mumwe munhu anotevera pasina uchapupu hweVA huripo. Muranda cq. Psychopath inoda kuchengetedzwa nguva dzose, kushingaira kwebasa rakadaro relackey rinowedzera uye ruzivo rwunenge rwakakwirira. Pamberi kweAI-inotungamirirwa UAV / mabhobhoti ari kushanda, nguva ino inofanira kushandiswa kugadzirisa zviri pamutemo zvose, zvechokwadi mumagumo enyika
« The Thijs H. PsyOp yaifanira kukanganisa nyanzvi yehupfumi uye iyo yakatove yakagadzirirwa nhasi
Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp iye zvino aishandiswawo kudai zvinyorwa zvemakambani kumagweta? »
Total Visits: 16.044.878